पूर्वका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हवाई सेवा मार्फत जोडिँदै « Mechipost.com
पूर्वका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र हवाई सेवा मार्फत जोडिँदै
प्रकाशित मिति: २ पुष २०७६, बुधबार २१:०४
निजी हवाई सेवा कम्पनीहरुले प्याकेज नै बनाएर हवाई सेवा सुरु गरेपछि ताप्लेजुङका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरु हवाई सेवा मार्फत जोडिएका छन् ।
सीता एयर र माउण्टेन एयरले आपसी सहकार्य गरि झापाको भद्रपुर र विराटनगरबाट ताप्लेजुङमा अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा मन्दिर, खोटाङको हलेसी, लुक्ला लगायतका ठाउँमा हवाई सेवा सुरु गरेपछि यी स्थानहरु हवाई सेवा मार्फत जोडिएका हुन् । सीता एयरले आइतबारदेखि दैनिक भद्रपुर–ताप्लेजुङ सिधा उडान सुरु गरेको छ ।
यस्तै लामीडाँडा, लुक्लामा समेत उडान भइरहेको माउण्टेन हेलिकप्टर प्रा.लि.का महाप्रवन्धक दिलबहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पाथीभरा र हलेसी दर्शनको प्याकेज नै बनाइएको छ । जसअनुसार भद्रपुर र विराटनगरबाट रु. २३ हजारमा पाथीभरा आवतजावत गर्न सकिन्छ । भद्रपुर र विराटनगर दुवै ठाउँबाट सीता एयरले सुकेटार विमानस्थलसम्म दैनिक उडान भर्ने छ भने सुकेटारबाट माउण्टेन एयरको हेलिकप्टरले दर्शनार्थीलाई मन्दिरसम्म लगेर पुनः सुकेटारमा ल्याउनेछ । पाथीभराको दर्शनपछि सुकेटारबाट यात्रुले भद्रपुर, विराटनगर नभई लुक्ला समेत जान पाउनेछन् ।
हवाई सेवा सुरु भएपछि लुक्लाबाट समेत पाथीभरामा दर्शनार्थी आउन थालेका छन् । यस्तै हलेसी दर्शनको समेत २३ हजारको प्याकेज बनाएर उडान भर्न थालिएको छ । यस्तै माउण्टेन हेलिकप्टरले धनकुटाको भेडेटारबाट समेत पाथीभरा उडान सुरु गरेको छ । भेडेटारबाट पाथीभरासम्मको ओहोर–दोहोर भाडा रु. ३० हजार छ ।
हवाई सेवाले तीर्थयात्रीलाई मात्रै नभई अन्य यात्रुलाई समेत सहज बनाएको छ । सीता एयरको विमान विहान भद्रपुरबाट सुकेटार र सुकेटारपछि लुक्ला हुँदै काठमाण्डौ जाने छ । पुनः काठमाण्डौँबाट लुक्ला हुँदै सुकेटार आई भद्रपुर वा विराटनगर फर्कने छ ।
प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रहेको पूर्वमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको र यहाँ रहेका दर्जनौँ विमानस्थलमा हवाई सेवा नभएकाले यस क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यसले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन समेत सहयोग पुग्ने हवाई सेवा कम्पनीहरुको विश्वास छ ।
यता सुकेटार विमानस्थलबाट नियमित उडान सुरु भएपछि स्थानीयले तराईका भूभाग सहित काठमाण्डौँसम्मको यात्रामा सहज हुने विश्वास लिएका छन् । यस्तै पर्यटकहरुको संख्यामा समेत वृद्धि हुने, जटिल प्रकृतिका विरामीको उद्धारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वका सबै विमानस्थलमा हवाई सेवा नियमित बने भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत स्थानका पर्यटकलाई समेत सहज हुनेछ । (प्रदेश पोर्टल डटकमबाट)